US Kufamba Yambiro, asi zvichiri nani muBahamas
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » US Kufamba Yambiro, asi zvichiri nani muBahamas
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau • Wtn
Rondedzero yenyika iyo United States iri kuwedzera kune yayo "musafambe rondedzero" iri kukura. Kubva nezuro zvakare inosanganisira maBahamas.
Zvichiri nani uye zvakachengeteka muBahamas kana zvichienzaniswa kuenda kuAmerica akawanda seFlorida kana Louisiana.
Sezvo imba yakadai isingafambi runyorwa isiri munzvimbo, uye kuenzanisa kwepamba hakuzi chikamu chenyevero yekufamba kwenyika, nzvimbo dzekushanya dzinoenda kune dzimwe nyika seBahamas dzave kugogodzwa nehurongwa hweAmerica.
Sangano reUS Centers For Disease Control and Prevention (CDC) rakapa yambiro 4 yekufamba kune vanoenda kuzororo kuAmerica vari kuronga kushanyira Bahamas.
Izvi zvinogona kukanganisa Disney Cruise Line Vashanyi vanoronga kushanyira nyika yechitsuwa pane Disney cruise chikepe munguva pfupi iri kutevera.
Kunyange hazvo hutachiona huri pakakwirira kwazvo muUnited States, vari kudzikira muBahamas, vachibvunza yambiro dzeChikamu 4 chakapihwa neU.S. kurwisa Bahamas
CDC nhasi yawedzera nyika nhanhatu kune yayo Chikamu 6 yekufambisa yambiro.
Idzi nyika nhanhatu dzakawedzerwa kuUS Usafambe runyorwa ndeidzi:
Zviri nani chaizvo kushanyira Bahamas?
Zvirinani muBahamas. Iyi yaive sirogani yenyika ino inozivikanwa nemabhandi machena machena ejecha, mvura yebhuruu, uye matenga ebhuruu. Iwo mabhazi echikepes zvakare chikamu chakakosha cheiyo nzvimbo yekushanya munyika ino yeCaribbean.
Izvo zvichiri nani muBahamas!
… Asi hurumende yeUS nhasi yasiya chikamu chekuti yakachengeteka zvakadii kushanyira Bahamas zvichienzaniswa neFlorida kana Hawaii. Panzvimbo iyoyo, Hurumende yeUS yakaburitsa iyo isingafambi yelevel yechina kumirisana nemuvakidzani wayo mamaira zana chete kubva kugungwa reFlorida.
Hupfumi hweBahamas zvinoenderana neindasitiri yekufambisa neyekushanya. Iyo US ichipa Level 4 yambiro yekufamba kuodza mwoyo kukuru uye kutyisidzira kurudzi rwechitsuwa uye vagari veBahama mazana matatu nemakumi masere nesere. Vazhinji vavo vanoshanda uye vanovimba nehupenyu hweindasitiri yekufambisa neyekushanya, uye maAmerican ndivo vazhinji vevashanyi vavo.
Yambiro yekuAmerica yekushora Bahamas inoti:
Usaende kuBahamas nekuda kwe Covid-19. Chenjerera mune dzimwe nzvimbo dzeBahamas nekuda kwe mhosva. Verenga iyo yose Kufamba Kuraira.
Verenga iyo Dhipatimendi reHurumende COVID-19 peji usati waronga chero nzendo dzekunze.
The US Nzvimbo dzeDziviriro Kudzora nekudzivirira (CDC) yakaburitsa Chikamu 4 Yekufamba Hutano Ziviso yeBahamas nekuda kwe COVID-19, inoratidza yakanyanya mwero weECVID-19 munyika. Ngozi yako yekubatira COVID-19 uye kukura zviratidzo zvakakomba inogona kunge yakaderera kana iwe wakazara jekiseni ne FDA yakabvumidzwa jekiseni. Usati waronga chero nzendo dzekunze, ndapota ongorora zvinokurudzirwa neCDC vaccin uye isina kubayiwa vafambi. Shanyira Embassy COVID-19 peji kuti uwane rumwe ruzivo nezve COVID-19 muBahamas.
Bahamas hupfumi zvinoenderana nekushanya, paAmerican tourist
Zvinotoshamisa kuti United States iri kutyora zvese zvinyorwa pasi nehutachiona hutsva uye kufa, nepo nhamba dzeBahamas dziri pane downtrend. Nhamba dzekutapukirwa uye huwandu hwekufa muBahamas hwaive pazasi pehuwandu muHurumende yeFlorida kana Hawaii painoonekwa zvichienderana nehuwandu hwevanhu.
Musiyano wakakosha pakati peiyo hofori USA uye zvidiki zveBahamas ndeyekudzivirira.
apo 33% yevaAmerica vanoti havangambobaiwa jekiseni, uye mazhinji ezvese akabayiwa majekiseni, nepo kubaiwa nhomba kuri nyore muUS, iyo Bahamas diki haina kana jekiseni rakaringana rekupa kuvanhu vayo vese. Chete 15.3% yevagari vanobayiwa.
Kugamuchira vashanyi vakabaiwa kunokosha kune hutano hweBahamas yekufambisa uye indasitiri yekushanya
VaBahamas vakashuma hutachiona hunosvika 103 pavanhu zviuru zana nemazana manomwe mumazuva manomwe apfuura.
Idzo nhamba dzinomiririra 37% yeiyo yepamusoro, nepo United States ichitaura 59% yehuwandu hwehutachiona.
Zvinonzwisisika iro US State department rakapihwa mvumo yekuyambira maAmerican nezve njodzi kunze kwenyika. Nekudaro, kana zvichitarisirwa nenhamba dzekugara muBahamas kune akabayiwa American zviri pachena kuchengetedzeka pane kugara pamba muzviitiko zvakawanda, nei Dhipatimendi reHurumende risingade kuisa chokwadi ichi mumazano aro ekune dzimwe nyika?
Lack yekubatana kwepasirese mukushanya
Ndiwo mumwe muenzaniso apo kushomeka kwehutungamiriri hwepasirese mukushanya, kana hutungamiriri hwepasirese hauna mumiriri wekushanya.
Juergen Steinmetz, sachigaro we World Tourism Networkk inoti: "Kushaikwa kwekubatana pamwe nehutungamiriri muindasitiri yekushanya nepasirese ndiyo inotyisidzira hupfumi uye hutano."
Iyo Bahamas inzvimbo yakachengeteka uye yakachena kune vese kuti vafare.
Tiye Bahamas Tourism Board yakagadzirisa peji rezvehutano hwekufamba
Hutano uye hutano hwevose vanopinda kana vanogara muBahamas vanoramba vari ivo vekutanga pekutanga, uye kushingairira kuedza kunoitwa kuti kudzikise kupararira kwe COVID-19. Aya anotevera mafambiro ekufamba uye ekupinda akaiswa munzvimbo yekuona kuti Bahamas inzvimbo yakachengeteka uye yakachena kune vese kuti vafare.